ozuzu na nkpuru na-eto eto nduku - "Usoro nduku"
Isi Label ozuzu nduku na nkpuru
Label: ozuzu nduku na nkpuru
Nduku na-eto eto na mba ndị kasị daa ogbenye n'ụwa
N'ịbụ ndị ihe karịrị otu ijeri mmadụ na-eri n'ụwa nile, nduku abụrụla otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị mkpa maka igbochi agụụ. ...
Ọnụnọ nke ụdị nduku na-arụpụta nke ukwuu nke nwere ike ịghọta nke ọma ikike ha nwere na ala na ọnọdụ ihu igwe bụ isi ihe iji nweta ihe ọkụkụ bara ụba ma kwụsie ike ...
A tụlere nsogbu nke nnọchi mbubata na ụlọ ọrụ agro-industrial na nzukọ na Institute of Agricultural Biotechnology.
Site na 2024, obodo anyị ga-egbo mkpa nke ụlọ ahịa na mkpụrụ nke kasị elu reproductions nke ozuzu rụzuru. Na njedebe a ...
Ụlọ ọrụ ugbo nke mpaghara Dmitrovsky nke mpaghara Moscow gbanwere na poteto mkpụrụ nke ya
Ulo oru ugbo Doka-Gene Teknụzụ LLC nke Dmitrovsky obodo mepere emepe nke mpaghara Moscow na-amịpụta ihe karịrị puku tọn 7 puku tọn poteto kwa afọ - ọrụ ahụ ...
A na-ebipụta ihe ndị na-adọrọ mmasị na ọnọdụ na-enye nduku na akwukwo nri na Urals site na FederalPress portal. Ka anyị lelee ha...
N'ime afọ atọ, Russia ga-enye onwe ya poteto mkpụrụ osisi dị elu
Na 2021, ụlọ ọrụ sayensị Russia, yana ụlọ ọrụ dị na mpaghara akụ na ụba, mepụtara ihe dị ka puku tọn 20 nke mkpụrụ osisi nduku, ...
Azụpụtara nnukwu poteto dị iche iche na Urals
Ndị ọkà mmụta sayensị sitere na South Ural Research Institute of Horticulture na Potato Production UrFARC Ural Alaka nke Russian Academy of Sciences edebanyela aha na State Register of Breeding Achievement Amulet nduku ọhụrụ, ...
Ndị Belarus ahọrọla poteto kacha atọ ụtọ
Na mpaghara Vitebsk nke Belarus, na ndabere nke Vitebsk Zonal Institute of Agriculture nke National Academy of Sciences of Belarus, e mere nzukọ ọmụmụ na ụdị nduku kachasị mkpa. ...
Peeji 1 n’ime 2 1 2 Osote